ဘောလုံးဟောကိန်းများ Operario-PR vs Coritiba 25 July 2021
ဘရာဇီး Serie B
Operario-PR 1 Coritiba 0
1xTipz (56.88% ရေနံချောင်း / 5840) Coritiba အနိုင်ရသူ
Asianbookies (75.41% ရေနံချောင်း / 12020) ဆွဲပါ
ဒီမှာ ပွဲ၏အခမဲ့ဟောကိန်းများ Operario-PR vs Coritiba ဒီ၏ Jul 25, 2021 ယှဉ်ပြိုင်မှုအတွက် ဘရာဇီး Serie B
လောင်းကစားခြင်းအတွက်အခမဲ့အကြံဥာဏ်များကားအဘယ်နည်း Operario-PR vs Coritiba?
ဘရာဇီး Serie B ဒီနေ့ခန့်မှန်းချက်ကဘာလဲ?
ခန့်မှန်းခြင်းနည်းလမ်း - bet-in-asia.com ဆိုဒ်သည်ကိန်းဂဏန်းများအနက်နှင့်ရာခိုင်နှုန်း၏အနက်ကိုအခြေခံသည် သင်္ချာပုံသေနည်း ၎င်း၏ပေးရရှုပ်ထွေးဒေတာ၏ ရလဒ်များကိုအခမဲ့ဟောကိန်းများ အပေါ် Operario-PR vs Coritiba အစည်းအဝေး။ လုပ်ခွင့်ပြုသည့် technique ကို တိကျသောခန့်မှန်းချက်များ ထိုနေ့၏ပွဲစဉ်ပေါ်မှာ ဘရာဇီး Serie B of Jul 25, 2021
အဆိုပါ Datasets ဖို့အသုံးဝင်သောဖြစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းလောင်းကစားကိုကူညီပါ သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက်လောင်းကြေးကမ်းလှမ်းမှုတွင် - 1x2 Operario-PR အနိုင်ရ၊ Coritiba အနိုင်ရ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အရေအတွက် sဒီပွဲမှာဒါမှမဟုတ်ရမှတ်ထဲမှာသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ် အတိအကျရမှတ်.
၏ရည်မှန်းချက် Ricardo Bueno da Silva
အားဖြင့် Matheus Sales
အစားထိုး Igor Paixão
အစားထိုး Antonio Thomaz Santos de Barros
အားဖြင့် Felipe Garcia Gonçalves
အစားထိုး Marcelo Machado dos Santos
အစားထိုး Jean Carlo Bernieri Fernandes
အားဖြင့် Ricardo Bueno da Silva
အစားထိုး Rodolfo Filemon de Oliveira da Silva
အားဖြင့် Rafael Batista